वीर अस्पतालका कर्मचारी आन्दोलित, प्रहरी हस्तक्षेप, चार कर्मचारी घाइते « Nagarik Khabar
प्रकाशित मिति :2August, 2021 6:02 am
अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी डा. जागेश्वर गौतमले कर्मचारीको हकहितमा काम नगरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले ८ महिनादेखि नपाएको कोभिड—१९ जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने, औषधी उपचार भत्ता, सेवा विस्तार भत्ता पाउनु पर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीले अस्पताल सुधारको माग गर्दै आएका छन् । कर्मचारीले डा. गौतमले गैरकानुनी रूपमा स्वास्थ्य सामग्री प्रक्रिया अगाडि बढाएको आरोप लगाएका छन् ।
वीरका कर्मचारीले माग सम्बोधन नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन् । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
चार कर्मचारी घाइते
वीर अस्पतालका कर्मचारी आन्दोलित